Ị nọ ebe a: Home / Nsogbu Erosion / Na-ebute Mgbapu na Mkpụrụ nke Ahịhịa na Osisi
Ephemeral Gullies - Ha bụ naanị obere ọwa na-aga ma na-adabere na mmiri ozuzo
As I was reading this report about erosion, I thought to myself that this information was absolutely irrelevant to what I’m doing as the editor of The Planet Fixer Magazine. Ha na-ekwu banyere ụbụrụ ọka ahụ, banyere eziokwu ahụ na ha na-efunahụ nke pụtara na ọtụtụ mmiri ozuzo ma ọ dịghị ihe ọ bụla dị mkpa m nwere ike iji dịka ihe ngwọta maka Earth Plan. Mgbe na mberede na njedebe akụkọ ahụ, nkwubi okwu ahụ bụ:
Omume kachasị dị irè bụ ịkụ ahịhịa ma ọ bụ osisi n'ime ma ọ bụ n'akụkụ ọnụ ala ubi
nchịkọta mmiri bụ ọwa nke na - enweta ngwa ngwa mgbe mmiri ozuzo gasịrị (ya na anyanwụ na - apụkwa)
ma kwere m ... enwere otutu ihe ojoo n'ime ya!
belata onu ojoo
belata oke mmiri
nke kachasị mfe kama ọ bụ ọrụ kachasị dị irè bụ ịkụ mkpụrụ nke ahịhịa ma ọ bụ osisi n'ime ma ọ bụ n'akụkụ n'akụkụ nke ubi. A na-akpọ eriri anụ dịka ncha n'ihi na ha na-ehichapụ ihe na-edozi ahụ na ihe na-asọ oyi na-asọ na nsọtụ ubi
Akwukwo ahihia ma obu osisi a kuru n'akuku iyi a na-akpo ya bu ndi na-eri nri. Ndị na-agba odo odo Ripar bụ akara ikpeazụ nke nchekwa maka nchịkọta mmiri na-asọ asọ tupu ya abanye na iyi ma ọ bụ okporo mmiri
A na-akụ ihe ndị na-eme ka ọ bụrụ aha dị ka aha ahụ, na-agbaso ngwongwo nke ubi na-adaba. Ihe na-emepụta ihe na-eme ngwa ngwa ma belata nsị na mmiri nsị na mmiri na-ekpofu mmiri ka ọ na-agafe n'ọhịa.
Lee na stats ndị a!
Omume ndị a dị mfe pụrụ ịdị irè. Nyochaa nke nchọpụta a na-ebipụta na-achọpụta na ndị na-eji ụgbụ afụ ụra ejide:
41 ka 100 pasent nke sedimenti
9 gaa na 100 pasent nke mmiri na-agba ọsọ
27 ka 96 pasent nke phosphorus
7 ka 100 pasent nke nitrate
A na-anwale ndokwa abụọ dị iche iche. Otu na-agbanye 10 pasent nke ala ubi n'ime ahihia ahihia nke dị na ala nke ubi ndị na-agba. Ndị na-esote ndị nke abụọ na-etinye 10 pasent n'ime ibe ahịhịa.
Article Source – Ịkwụsị ala - Akụkọ zuru ezu
Documents – Ngalaba Egwu - Planet Fixer Public Library
Pictures Talk! – Egwu nke Echiche
Video banyere ịchịkwa ikuku nke gullies mere
Lezie anya vidiyo a. Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị, ma ọtụtụ n'ime ya bụ ihe gbasara ... na-ekpughe ọnọdụ na otú ọ dị njọ. Ngwọta ga-agba n'etiti anya gị naanị maka sekọnd ole na ole!